VLC 2.0 mechara nweta onye ọ bụla na gam akporo | Gam akporosis
VLC 2.0 Ugbu a dịịrị onye ọ bụla nwere Nchọgharị Ntanetị, Ngwanrọ TV TV, na More
Ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla VLC pụtara, na-abụghị bụrụ mma agha swiss n'ihi na video na audio playback, ọ bụ n'ihi na eziokwu na otu n'azụ ya maara otú ịzụlite ngwa dị ka onye ọ bụla ọzọ. Afọ ejirila beta mbụ nke VLC nọrọ na-ahapụ mmelite na ya na ụdị nke ndị ọzọ gaara ewepụta dị ka nke ikpeazụ. Mana ụmụ okorobịa nọ na VLC chọrọ ka ụdị gọọmentị rute n'ọnọdụ kachasị mma na nke a emeela na 2.0.
Ndị mmepe ahụ anwalele 1.9.x patch oge ụfọdụ ma tinye ugbu a ikpeazụ version na gam akporo, kpomkwem 2.0. Mmelite a mechara nakweere LAN akụkụ nke ndị ahịa VideoLAN nwere nyocha netwọkụ kwesịrị ekwesị yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị ga-akọwa n'okpuru. Versiondị ọhụụ na-atọ ụtọ maka ọfụma vidiyo na vidiyo dị mma nke onye ọ bụla ga-etinyeworị na ngwaọrụ ha.
Nke a bụ VLC 2.0 Gịnị bụ Ndepụta Ọhụrụ:
Nchọgharị netwọk (Windows mbak, UPnP, NFS, FTP, SFTP ...)
Mpempe akwụkwọ ọkacha mmasị na URL
Ndetuta egwu ọkpụkpọ maka vidiyo
Redesigned ificationsma Ọkwa na Control
Redesigned nche akụkọ ihe mere eme
A na-agbakọta gam akporo TV na gam akporo gam akporo, yabụ ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịhọrọ nhọrọ gam akporo TV interface
Android TV interface e mma
Mma playback nke niile ụdị video
Chọọ netwọk dị na mpaghara Ọ ga - enyere gị aka ịnweta ngwa ngwa nke ọdịnaya dị na ngwaọrụ gam akporo gị ma ọ bụrụ na ịnwe ndekọ na ụdị faịlụ multimedia niile na PC gị. Ọ na-akwado njikọ dịpụrụ adịpụ dịka FTP na SFTP. Nwere ike ịchekwa nchekwa na URL si ngwa.
Ma dị ka ịmata, ị nwere ike rụọ ọrụ A gam akporo TV interface maka VLC. Ihe na-adọrọ mmasị maka ịlele na TV ka VLC nwee ike ijikwa ya na nnukwu ihuenyo. Mmelite ahụ adịlarị site na Storelọ Ahịa Play, yabụ egbula oge ịhọpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » VLC 2.0 Ugbu a dịịrị onye ọ bụla nwere Nchọgharị Ntanetị, Ngwanrọ TV TV, na More
Nwere ike iji mkpọchi okwuntughe n'efu na Evernote